အရိပ်ချစ်: December 2012
Posted by Ayeit Chit at 18:01 No comments:
တစ်ယောက် ယောက်က သင့်ကို ကားလမ်းကြောင်း ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင် ဒေါသထွက်တာ ခံစားဖူး ပါသလား။ သင့်သားသမီးက သင်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း လုပ်မပေးခဲ့ရင် တွေးတွေးပြီး ဒေါသ ပေါက်ကွဲ ဖူးပါသလား။ ဒေါသဆိုတာ ပုံမှန် ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အကောင်းမြင်ပြီး တိုးတက်မှု ဖြစ်စေတဲ့ နည်းလမ်းကို ဘယ်လို သိနိုင်ပါ့မလဲ။ ထိန်းချုပ်မှု မရှိတဲ့ ဒေါသဟာ ဆိုးရွားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြား သူစိမ်းတွေနဲ့ ဒေါသ ဖြစ်စရာ တစ်ခုခု ဖြစ်လာရင် ဒေါသ ကင်းဝေးရေး အတွက် လုပ်ရမယ့် ပင်ကိုယ် စွမ်းရည်ကို အသုံးချဖို့ အချိန် ရောက်ပြီဆိုတာ သိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒေါသ ကင်းရေး ၁၀ ချက်ဆေးဟာ သင့်ရဲ့ ဒေါသတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကူညီနိုင်မယ့် နည်းလမ်း အဖြစ် အသုံးပြုဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
(၃) စိတ်တည်ငြိမ်အောင် လုပ်ပြီး သင့်ရဲ့ ဒေါသကို ရင်ဖွင့် ပြောပြတတ်အောင် လုပ်ပါ။ ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တဲ့ နည်းကိုမသုံးဘဲ သင့်ရဲ့ ခံပြင်းမှု၊ မချင့်မရဲ ဖြစ်မှုကို ထုတ်ဖော် ပြောပြဖို့ အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာ အခြေ အနေကို ပိုလို့ ဆိုးရွား စေနိုင်ပါတယ်။
(၄) လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခု လုပ်လိုက်ပါ။ ကာလ လှုပ်ရှားမှု လုပ်တာဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှု တွေအတွက် ထွက်ပေါက်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာ သေချာ ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒေါသ ပေါက်ကွဲလုဆဲဆဲ အချိန်မှာ လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်း ပါတယ်။ အပြင်ထွက်ပြီး ခပ်သွက်သွက် လမ်းလျှောက်၊ ဒါမှမဟုတ် ပြေးလိုက်၊ ဒါမှမဟုတ် ရေကူးလိုက်၊ ဒါမှ မဟုတ် အလေးမလိုက်ပါ။
(၅) တစ်ခုခုမပြောခင် အသေအချာ စဉ်းစားပါ။ မစဉ်းစားမိဘဲ ပြောမိမယ်ဆိုရင် ဝမ်းနည်း စိတ်ထိခိုက်လာပြီး ရန်များဖို့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ သင်ပြောချင်တာကို လက်ရေးနဲ့ ချရေးလိုက်ပါ။ ဒီလို လုပ်လိုက်တာနဲ့ ပြဿနာ တွေကို ပြီးအောင် လုပ်နိုင်ပြီး ဒေါသ ထွက်တဲ့အခါ လမ်းကြောင်း ပြောင်းတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်မှာပါ။
(၆) ပြဿနာ တွေကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာလိုက်ပါ။ သင့်စိတ်ကို ကယောက် ကယက် လုပ်တဲ့အပေါ် အာရုံစိုက်မဲ့အစား၊ အဓိက ပြဿနာကို ဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်ဖို့ ဒေါသ ထွက်အောင် လုပ်တဲ့သူနဲ့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
(၇) ပြဿနာကို ထုတ်ဖော်တဲ့ အခါမှာ ‘ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ’ ဆိုပြီး သုံးနှုန်း ပြောဆိုပါ။ ဒီလို သုံးနှုန်း ပြောဆို လိုက်တာနဲ့ ဝေဖန်တာတို့၊ အပြစ်တင်တာ တို့ကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်မှာပါ။ သူတစ်ပါးကို ဒေါသ ဖြစ်အောင်လုပ်တာ၊ ဒါမှ မဟုတ် မကျေမချမ်း အောင် လုပ်တာတွေကို ရှောင်ရှား နိုင်မှာပါ။ စိုးရိမ် ပူပန်မှု၊ အားပြိုင်မှုတွေ မရှိလာ နိုင်တော့ပါဘူး။ ဥပမာ- ‘ကျွန်တော့် အိမ် အလုပ်တွေကို ခင်ဗျား တကယ် ကူညီ သင့်တယ်ဗျာ ’ လို့ ပြောမယ့်အစား ‘ကျွန်တော် စိတ်မချမ်းသာဘူးဗျာ .. ဒီညနေကျတော့ အိမ် အလုပ်တွေကို ခင်ဗျား ကူညီပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး’ လို့ ပြောလိုက်တာမျိုးပေါ့။
(၈) သဝန်တို၊ မနာလိုတာတွေ မလုပ်ဖို့ပါ။ တကယ်လို့ သူတစ်ပါးကို ခွင့်လွှတ် နိုင်ရင် နှစ်ဦးစလုံး အတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ သင်လိုချင်တဲ့ အတိုင်း လူတိုင်း ကို အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံဖို့ မျှော်လင့်ထားတာ သဘာဝ မကျပါဘူး။
(၉) စိတ်ဖိစီးမှုကို ရယ်စရာ ဟာသလုပ်ပြီး ချေဖျက် ပစ်လိုက်ပါ။ ရယ်စရာ လုပ်ပြစ်လိုက်ခြင်းဟာ စိတ်ပင်ပန်း ညစ်နွမ်းမှုကို ပျံ့နှံ့အောင် လုပ်လိုက်သလို ပါပဲ။ စောင်းချိတ်တဲ့ စကားထေ့လုံး ငေါ့လုံးတွေ မပြောမိဖို့ အရေး ကြီးပါ တယ်။ ဒီလို ပြောလိုက်မိတဲ့ အတွက် ခံစားချက်တွေကို နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အရာ ခပ်သိမ်းကို ပိုဆိုး ရွားစေနိုင်ပါတယ်။
(၁၀) အပန်းဖြေ အနားယူတဲ့ အလုပ်ကို လေ့ကျင့်ပါ။ အနားယူဖို့ စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ချခြင်းဟာ သင့်ဒေါသကို ထိန်းချုပ် ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အသက်ရှု လေ့ကျင့်ခန်းကို များများ လေ့ကျင့်ပါ။ အနားယူတဲ့ မြင်ကွင်းကို တွေးကြည့် ကြည့်ပါ။ ညင်သာတဲ့ စကားလုံးတွေကို ထပ်တလဲလဲ တွေးကြည့်ပါ။
ဥပမာ - သက်သက် သာသာနေပါ။ ဒေါသကို လျှော့ဖို့ တခြားခိုင်မာတဲ့ နည်းလမ်း တွေကတော့ သီချင်းနားထောင်ပါ။ စာများများရေးပါ။ ယောဂ ကျင့်ပါ။ လူတိုင်း နီးပါးတော့ ဒေါသ ဖြစ်ဖူး ကြမှာပါ။
ဒေါသ ထွက်လာရင် ဘာလုပ်ရမလဲပေါ့။ ဒေါသကို ပေါက်ကွဲ ထွက်လိုက်ရင်ပဲ ကျွန်မလည်း စိတ်ချမ်းသာ သလိုလို၊ ဒေါသကို မြိုသိပ်လိုက်တာက ကောင်း သလိုလို၊ ပင်လယ် ကမ်းခြေသွားပြီး အော်ဟစ် ခိုင်းလိုက်ရင်ပဲ ဒေါသ ပြေသွားသလိုလို၊ တောင်ထိပ်ပေါ်တက်ပြီး အော်ရင်ပဲ ရင်ထဲမှာ ပေါ့သွား သလိုလို အဲလို သလိုလိုတွေကြားထဲမှာ ဒီနည်းလမ်းလေးကို သုံးကြည့်ရင် ကောင်းမယ် ထင်တာနော်။ ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီး ဒေါသထွက်တဲ့ သူတွေ အနည်းဆုံးတော့ ပြုံးမိသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by Ayeit Chit at 09:30 No comments:
ကွန်ပျုတာ စဖွင့်တာနဲ့ သူ့ဆီကမေးလ်လေးများ
တနေ့တခါလောက် ပုံမုန်သူ့ wall ကိုသွားကြည့်
နောက်တာ တွေ့တာကိုယ် သီးမခံခြင်းတော့ပါဘူး...
ထပ်အားမရသေးရင် close fri ပါလုပ်ထားတတ်ပါတယ်...
သီချင်းစာသား လေးတွေက ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေသလားပေါ့...
သူ့အကောင့်လေး စိမ်းနေတာမြင်ရင် သင့်ရင်ထဲမှာအလိုလိုပျော်
Posted by Ayeit Chit at 15:58 1 comment:
ဝမ်းဗိုက်ချပ်ရပ်လိုသူတိုင်း ဆောင်သင့်၊ ရှောင်သင့်သော အစား အသောက်များ
လေပွပြီး ဗိုက်ပူတာမျိုး မဖြစ်စေဘဲ ဝမ်းဗိုက် ချပ်ရပ်လိုသူတိုင်း ရှောင်သင့်၊ ဆောင်သင့်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို ကျွမ်းကျင်သူတွေက အောက်ပါအတိုင်း အကြံပြု ရေးသားထားပါတယ်။
အဆိုးဆုံး အစားအသောက် - ဆော်ဒါ အချိုရည်
ဗိုက်ပူမှာ စိုးရွံ့သူတွေ အနေနဲ့ ကာဗွန်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ဂက်စ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေဟာ ဗိုက်ကို လေတွေနဲ့ ပြည့်နေစေပြီး ဗိုက်ပူကာ လေပွနေစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုက်ချပ်ရပ်လိုရင် ဆော်ဒါ အချိုရည်အစား ရေ ဒါမှမဟုတ် ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ အရည် (ဥပမာ-လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်) ကို သောက်သင့်ပါတယ်။ ဒီအရည်ထဲမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် များစွာ ပါဝင်ပြီး ဝမ်းဗိုက်ထဲ အဆီစုတာနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အစားအသောက် - ပန်းဂေါ်ဖီ
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ကညွတ်၊ငရုတ်သီး၊ ပဲဝါ စတဲ့ အစားအစာတွေမှာ ဗီတာမင်အေ၊ စီနဲ့ ကေအပြင် ဖောလိတ်၊ ဘီတာကယ်ရိုတင်း၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
အဆိုးဆုံး အစားအသောက် - အခွံချွတ်ထားသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်
ဂျုံဖြူနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ မုန့်တွေနဲ့ ထမင်းဖြူတွေကို မစားပါနဲ့။ ဒီအစာတွေက အစာကြေလွယ်ပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နဲ့ အင်ဆူလင်အဆင့်ကို မြင့်တက်စေလို့ပါ။ အင်ဆူလင်အဆင့်မြင့်တက်တာက ဝမ်းဗိုက်တစ်ဝိုက် အဆီစုပုံမှုကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အစားအသောက် - အခွံချွတ်မထားသော ကောက်နှံစာ
အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဆန်လုံးညို၊ ပေါင်မုန့်ညိုနဲ့ ပဲနီလေးလို အစာတွေကို စားပါ။ အမေရိကန် အာဟာရ ဆေးပညာဂျာနယ်ရဲ့ လတ်တလော လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံစာဟာ ကယ်လိုရီ ထိန်းချုပ်ပေးပြီး ခါးတစ်ဝိုက်ကို အဆီပိုတွေ ကင်းဝေးစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုးဆုံး အစားအသောက် - ဆားကဲသော အစားအစာ
ပဲပိစပ်ဆော့ အများအပြားပါတဲ့ ဆူရှီစားပြီးချိန်မှာ လေပွသလို ခံစားနေရပါသလား။ ဆိုဒီယမ်များစွာပါတဲ့ အစားအစာတွေကို စားတာက ရေစုဆောင်းမှု များတာကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုက်က ဖောင်းလာပြီး လေပွလာတတ်ပါတယ်။ ဗိုက်သား ချပ်ရပ်စေဖို့ တစ်နေ့မှာ ဆိုဒီယမ် ၂၀၀၀ မီလီဂရမ်အောက်ပဲ စားပါ။
အကောင်းဆုံး အစားအသောက် - မပြည့်ဝဆီ
သံလွင်ဆီလိုမျိုး မပြည့်ဝဆီပါတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ဗိုက်သားချပ်ရပ်စေတယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်တစ်ရပ်အရ သိရပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အစားအသောက် - ရှလကာရည်
ရှလကာရည်မှာပါတဲ့ ချဉ်တဲ့အရသာနဲ့ စူးရှတဲ့ အနံ့ကိုပေးတဲ့ ဓာတ်တွေဟာ ဗိုက်အဆီကို ချေဖျက်ပေးတယ်လို့ ဂျပန်လေ့လာမှု တစ်ရပ်က ဆိုပါတယ်။ အဝလွန်တဲ့ လူတွေဟာ တစ်နေ့မှာ ရှလကာရည် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း- နှစ်ဇွန်း စားရာ ၁၂ ပတ်အကြာမှာ ကိုယ်အလေးချိန်၊ ဗိုက်အဆီနဲ့ ခါးအတိုင်းအတာ သိသိသာသာ လျော့ကျမှုရှိတာကို လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ရှလကာရည်မှာပါတဲ့ Acetic Acid ဟာ အဆီချေဖျက်တဲ့ ပရိုတင်းတွေ ထွက်လာအောင် မျိုးရိုးဗီဇကို ပြောင်းလဲပေးတာကြောင့်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
Posted by Ayeit Chit at 17:49 No comments:
.ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ ခက်ခဲပေမယ့် ပျက်စီးဖို့ လွယ်ကူတယ်
အမြဲပျော်ဖို့ခက်ခဲပေမယ့် ဝမ်းနည်းဖို့ လွယ်ကူတယ်
စိတ်ထဲကအပြီးထုတ်လိုက်ဖို့ခက်ခဲပေမယ့် ဒေါသထွက်ဖို့လွယ်ကူတယ်
လက်လေး ၂ စုံ..
.ပြန်လက်တွဲဖို့ ခက်ခဲ ပေမယ့် လက်တွဲဖြုတ်ဖို့လွယ်ကူတယ်
စိတ်ထဲကပြန်နုတ်ဖို့ ခက်ခဲပေမယ့် ဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့ ဒေါသနဲ့ ပြောလိုက်ရမှာတော့ လွယ်ကူတယ်
.ခေါင်းထဲ စာဝင်ဖို့ ခက်ခဲပေမယ့် စာတွေမေ့သွားမှာတော့ လွယ်ကူတယ်
.နောက်ပြန်လှည့် ဖို့ ခက်ခဲပေမယ့် လုပ်ချင်တာ လုပ်နေရမှာတော့ လွယ်ကူတယ်
တချိူ့ ကိစ္စတွေက လုပ်ဖို့ လွယ်ကူပေမယ့် ပြန်ပြင်မရတော့ဘဲ နောက်ပြန်လှည့် ဖို့ အချိန်နှောင်းနေတတ်ပါတယ်
နောက်ပြန်လှည့် ဖို့ အချိန်မနှောင်းသေးခင်မှာဘဲ အကြိမ်ကြိမ် စဉ်းစားပြီး
Posted by Ayeit Chit at 23:01 No comments:
အိုခြင်း။ ။ လှပနုပျိုနေကြသောသူအပေါင်း တို့သည် နောက်ဆုံးအိုရမည့်သူများသာဖြစ်သည်။ လှပနုပျိုခြင်းသည် အိုခြင်းဆီသို့စက္ကန့်တိုင်း၊ စက္ကန့်တိုင်း ရွေ့လျားနေ၏။
နာခြင်း။ ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းနေကြသော သူအပေါင်းတို့သည်လည်း
နောက်ဆုံး နာကြမည့်သူများသာဖြစ်သည်။ ကျန်းမာခြင်း၊သန်စွမ်းခြင်းဟူသည်မှာလည်း အစဉ်ထာဝရကျန်းမာနေမည်၊ သန်စွမ်းနေမည် မဟုတ်ပါ၊ တစ်နေ့တွင်နာကြရအုံးမည်။ မနာသူဟူ၍ မရှိ၊
သေခြင်း။ ။အသက်ရှင်နေကြသော သူအပေါင်းတို့သည် နောက်ဆုံးတစ်နေ့သေမည့်သူများသာတည်း။
ရှင်သန်ခြင်း။ အသက်ရှည်နေခြင်း ဟူသည်မှာ လည်း သေမည့်နေ့ သေမည့်အချိန် သို့ရွေ့ လျားနေခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်နေ့တော့သေကြရမည့်သူများဖြစ်ကြသည့်အတိုင်း သေရမည့်နေ့သည်မိမိတို့မွေးဖွား လာခဲ့သောနေ့နှင့်စာလျှင် ပို၍နီးကပ်လာနေပြီဖြစ်၏၊
၁။ သေခြင်း နားလည်မှု့
(က) ပစ္စုပ္မန် လက်ရှိ ခန္ဓာကို မခင်တွယ်၊
(ခ) အနာဂတ်လက်မဲ့ခန္ဓာကို မတောင့်တဘဲ သေနည်း ဟာအကောင်းဆုံးသေခြင်းဖြစ်၏။
၂။ ဒုက္ခ နှင့် သုခ သိမှု့
(က)နောင်ခန္ဓာ ရရင် ဒုက္ခ၊
နောင်တစ်ဖန် ပဋိသန္ဓေ မရရင် သုခ၊
(ခ)နောင်တစ်ဖန် ပဋိသန္ဓေ ရရင် ဒုက္ခ
နောင်တစ်ဖန် ပဋိသန္ဓေ မရရင် သုခ။
(က)နောင် ဘ၀ခန္ဓာ ဆုမတောင်းရ၊
နောင်ဘ၀ လူ နတ် ဗြဟ္မာ ဆုတောင်းလျှင် ရှာမှီးခြင်းလွဲသော ဆုတောင်းဖြစ်၏။
(က) အို နာ သေ ဘေး လွတ်ကင်းလိုပါ၏ ဟုသာဆုတောင်းပါ။
(ခ) လှူလျှင်နိဗ္ဗာန်ကို ရည်မှန်းလှူပါ၊ ဆုတောင်းမလွဲပါစေနှင့်။
(ခ)မအိုမီက အိုထားမှ အိုက သက်သာမည်။
ဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ပေးသော Uncle Tin Shwe အားကျေးဇူးအထူးတင်လျက်ပါ။
Posted by Ayeit Chit at 22:29 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 17:55 No comments:
အရှင်ဘုရားရေးတဲ့ အချစ်ကံခေပေမယ့် အနှစ်ကျန်စေရမယ် ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး စိတ်အားထက်သန်မိသလို မမမိုးသက်လှိုင်လို အချစ်ကံခေပြီး သောကပူလောင်ရမှာကိုလည်း စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေမိပါတယ်ဘုရား၊ အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းအောင် ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင် ကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာ မိန့်ကြားပေးတော်မူပါဘုရား…
မယမင်းဇော်က အချစ်ကံကောင်းနည်းကို သိချင်တယ်ဆိုပါတော့။ လွယ်ပါတယ်။ ဘာမှမခက်ပါဘူး။ အချစ်ကံကောင်းချင်ရင် ‘အချစ်ကံကောင်း’ ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ရှေ့နောက် ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ရုံပါပဲ။ ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တော့ ‘အကောင်းကံချစ်’ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အကောင်းကံချစ်ရင် အချစ်ကံကောင်းပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
အကောင်းကံဆိုတာ ကုသိုလ်ကံကို ပြောတာပါ။ ကုသိုလ်ကံဆိုတာလည်း ကောင်းတဲ့အလုပ် တွေကိုလုပ်တဲ့ ကုသိုလ်ကံရယ်၊ မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေရှောင်တဲ့ ကုသိုလ်ကံရယ်လို့ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေတော့ အများကြီးလုပ်နေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကလည်း မကောင်းတဲ့အကုသိုလ် အလုပ်တွေ နည်းနည်းပါးပါး လုပ်မိနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဟာ ပြည့်စုံတဲ့ကုသိုလ်ကံ မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် အကျိုးပေးဟာကွက်မရှိ ပြည့်စုံချင်ရင် ကောင်းတာလုပ်တဲ့ ကုသိုလ်ကံရော၊ မကောင်းတာရှောင်တဲ့ ကုသိုလ်ကံရော ‘ကုသိုလ်ကံ နှစ်မျိုးလုံး ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ‘အကောင်းကံ’ ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲ ကိုင်ပြီးပြောတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲဒီ အကောင်းကံနှစ်မျိုးနဲ့ ပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားရင်၊ အဲဒီအကောင်းကံ နှစ်မျိုးပြည့်စုံနေရင် အချစ်ကံ သေချာပေါက်ကောင်းပါတယ်။
‘အချစ်ကံခေပေမယ့် အနှစ်ကျန်စေရမယ်’ ဆောင်းပါးကို သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် ဘယ်လို အကုသိုလ်ကံကြောင့် အချစ်ကံခေရတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ကံခေတဲ့ အကုသိုလ်ကိုရှောင်ရင် အချစ်ကံကောင်းသွားပြီပေါ့။ (တစ်ခါလောက်တော့ ဖတ်ဖြစ်အောင် ပြန်ဖတ်စေချင်ပါတယ်)
လောကမှာ အဆိုးတွေ ကြုံကြုံနေရတယ်ဆိုတာ အကောင်းကံ မရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုးကံရှိနေလို့ပါ။ အဆိုးကံသာ မရှိရင် အဆိုးတွေ လုံးဝ မကြုံတွေ့ရပါဘူး။ အဆိုးမကြုံတွေ့ချင်သူတစ်ယောက် အဓိကလုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကတော့ အဆိုးကံ ရှောင်ကြဉ်တဲ့ အလုပ်ပါပဲ။
အချစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆိုးကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာ အချစ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အဆိုးကံတွေ အတိတ်ကကျူးလွန်ခဲ့လို့ပါ။ အတိတ်ကဆိုတဲ့ နေရမှာ ရှေးဘဝက အတိတ်ကံတွေပါသလို၊ ယခုဘဝရဲ့ ရှေ့ပိုင်းအတိတ်တွေလည်း ပါပါတယ်။ အချစ်ကံခေစေတဲ့ အဓိကအကျဆုံး အဆိုးကံကတော့ အချစ်ရေးမှာ သစ္စာမရှိခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အချစ်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်းပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူ၊ ကိုယ်အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်မှာ တစ်ခြားတစ်ယောက် သို့မဟုတ် တစ်ခြားအယောက်များစွာနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတာဟာ အချစ်ကံခေစေတဲ့ အဆိုးကံတွေကို ထူထောင်နေတာပါ။ အဲဒီကံ အကျိုးပေးတဲ့ဘဝ သေချာပေါက် အချစ်ကံခေနေမှာပါပဲ။
အချစ်ကံမခေစေချင်ဘူး၊ အချစ်ကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင် အချစ်ရေးမှာ သစ္စာရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ‘ချစ်တယ်’ လို့ ဖွင့်ပြောထားပြီးသား တရားဝင်ချစ်သူရှိပါလျက် တခြားတစ်ယောက်နဲ့ အီစီကလီ လုပ်တာမျိုး၊ ဘာလိုလို ညာလိုလိုရောတာမျိုး ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
တစ်ဖက်သားအပေါ် ရင်ထဲက တစ်ကယ်မချစ်ပါဘဲ ချစ်ဟန်ဆောင်တာမျိုး၊ တစ်ဖက်သား ကိုယ့်အပေါ် ကြွေသွားအောင် စတာ၊နောက်တာမျိုး၊ မျှော်လင့်ချက်ပေးတာမျိုး၊ တစ်ဖက်သားရင်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုခံစားသွားရအောင် ကလိတာ၊ရိတာမျိုး၊ ပျော်သဘောနဲ့ လူတစ်ကာအသည်း လှည့်ပတ်ခွဲတာမျိုး၊ အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲ တလွဲဂုဏ်ယူစိတ်တွေနဲ့ မြာပွေတာမျိုး၊ ရှုပ်တာမျိုး၊ ကြွားတာမျိုး၊ ရည်းစားတွေထည်လဲတွဲပြီး ပျော်ကြံတာမျိုး၊ ပုံလာလာ ပြောတိုင်းယုံတတ်တဲ့ အယုံလွယ်သူများ အပေါ် ပုံပြောကောင်းပြီး မျက်နှာများတာမျိုး၊ မဆွတ်ခင်က ညွတ်ချင်နေတဲ့ အညှာလွယ်သူတွေအပေါ် ပလီပလာချွဲနွဲ့ပြီး ကျောရရုံကြံတာမျိုး၊ တစ်သက်တာယုံမှတ်လို့ အရှက်ပါပုံအပ်သူတွေအပေါ် စားပြီးနားမလည် မသိချင်ယောင်ဆောင်တာမျိုး၊ လက်မထပ်သေးခင် အချစ်နယ်ကျွံပြီး ကြိုပွိုင့်ရိုက်တာမျိုး….. စတဲ့ …. စတဲ့…. အချစ်သူခိုး အလုပ်တွေ အကုန်လုံးကို တည်ကြည်ခိုင်ခံ့တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ မြင့်မြတ်စွာ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရပါမယ်။
(ကိုယ်က အချစ်ကံကောင်းချင်လား…? မကောင်းချင်ဘူးလား……? ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးလိုက်ပါ။ အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းချင်တဲ့လူ ဒီလောကမှာ ရှိမယ်မထင်၊ ကိုယ်ကအချစ်ကံကောင်းသူ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လိုက်နာစောင့်ထိန်းနိုင်ရပါမယ်။ ကိုယ်ထိန်းနိုင်သလောက် ထိန်းလေလေ အချစ်ကံကောင်းလေပဲပေါ့။ ကိုယ်က အချစ်ရေးမှာတော့ ကံကောင်းချင်တယ်၊ ကံကောင်းစေတဲ့အရာတွေကိုတော့ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာတော့ တရားလား၊ မတရားဘူးလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါ။)
အိမ်ထောင်ကျပြီးသားသူတွေ အနေနဲ့ကတော့ အခုပြောတဲ့ အချစ်ရေး ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုသာမက အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်ခြင်းတွေပါ ရှောင်ကြဉ်ကြရပါမယ်။ တရားဝင် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ထားတဲ့ ကာမပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလွဲရင် ဘယ်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်နဲ့မျှ ကာမဂုဏ်မှားယွင်းမူ၊ အပျော်အပါးလိုက်စားမူ မပြုရပါဘူး။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေမယ့် အချစ်ဥပဒေနဲ့ ညှိစွန်းတဲ့ အပြောအဆို၊ အပြုအမူမှန်သမျှကို လုံးဝကင်းရှင်းအောင် နေထိုင်ကြရပါမယ်။ ကင်းရှင်းနိုင်သမျှ ကင်းရှင်းလေ အချစ်ကံကောင်းလေပါပဲ။
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ (ကာမဂုဏ်မှားယွင်းမှုကံ) နဲ့ ပရဒါရကံ (သူတစ်ပါးသားမယား၊ လင်ယောက်ျား)ကို ကိုယ်နဲ့၊ နှုတ်နဲ့သာမက စိတ်နဲ့ပါ ရှောင်နိုင်လေ.. အချစ်ကံကောင်းလေပါပဲ။
အချစ်ကံဆိုးစေတဲ့ နောက်အဆိုးကံတစ်ခုကတော့ အချစ်သဝန်တိုခြင်းပါပဲ။ သို့မဟုတ် ချစ်သဝန်ကြောင်ခြင်းပါပဲ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက တစ်ခြားတစ်ယောက် သို့မဟုတ် တစ်ခြားအယောက်ပေါင်းများစွာအပေါ် ကျယ်ပြန့်သန့်ရှင်းတဲ့ ဖြူစင်တဲ့ မေတ္တာတွေ မျှဝေပေးနေတာအပေါ် မနာလို မရှူဆိတ်ဖြစ်ပြီး ဒီလူနဲ့ မပေါင်းရ၊ ဟိုလူနဲ့ မခင်ရ၊ ဘယ်ဝါနဲ့ မပတ်သက်ရ၊ စတဲ့ မနာလို စကားတွေပြောကြားနေတာ၊ သဝန်တိုအမိန့်တွေ ထုတ်ပြန်နေတာဟာ အချစ်ကံခေစေကြောင်း မကောင်းမှု အကုသိုလ်ကံတွေ စုဆောင်းနေတာပါပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရိုးသားဖြောင့်မတ် သန့်စင်စွာ ချစ်ခင်နေတာကြသူတွေကို ချစ်ခင်မှုပျက်ပြားသွားအောင် လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရိုးသားသန့်စင်စွာ ချစ်ခင်နေကြသူတွေကို ကိုယ့်အထင်နဲ့ကိုယ် မတော်မတရားစွပ်စွဲပြီး သို့မဟုတ် ကိုယ့်စိတ်နဲ့နှိုင်း အရိုင်းသတ်မှတ်ပြီး ချစ်ခင်မူပျက်ပြားသွားအောင် လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။
ပြီးတော့ ကိုယ်တစ်ဖက်သတ် ချစ်နေရသူက ကိုယ့်အပေါ် ပြန်မချစ်တာနဲ့ပဲ၊ တစ်ခြားဘယ်သူ့မှ မချစ်ရဘူး။ ချစ်လို့ကတော့ နှစ်ယောက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်ပစ်မယ်။ ဆက်ချစ်မရအောင် နှောက်ယှက်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားဟာ ကလေးသိပ်ဆန်လွန်းတဲ့ အချစ်ကံခေကြောင်း စိတ်ထားပါ။
‘အလှဝန်တို မငြင်ငြိုနှင့်’ ဆိုတဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကဗျာအလိုက်အတိုင်း ပြောရရင် ‘အချစ်ဝန်တို မငြင်ငြိုနှင့်’ လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဘာသာ သူတို့ရိုးရိုးသားသားပဲချစ်ချစ်၊ ဆန်းဆန်းပြားပြားပဲချစ်ချစ်၊ ကိုယ့်ရေစက်နဲ့ကိုယ်၊ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်၊ ချစ်နေကြတာကို ကိုယ်ကကြားထဲကနေရင်း မနာလိုဝန်တိုဖြစ်ပြီး ချစ်ခြင်းကိုသွားခွဲရင် သူတို့ချစ်ခြင်းကွဲကွဲ မကွဲကွဲ အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင် ကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာတော့ အချစ်ကံမွဲဆေး ဖော်စပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါပြီ။
‘ချစ်ခြင်းကိုမခွဲပါနဲ့’ (ချစ်နေကြသူကြား ကာယကံ၊ဝစီကံ၊မနောကံနဲ့ နှောက်ယှက်ခြင်း)၊ ‘ကုန်းတိုက်စကား မပြောဆိုပါနဲ့’ ဆိုတဲ့ ဝစီဒုစရိုက်သိက္ခာပုဒ် (ပိသုဏဝါစဝိရတိ သိက္ခာပုဒ်)ဟာ ချစ်သူရည်းစားအချင်းချင်း၊ ဇနီးခင်ပွန်းချင်းရဲ့ ချစ်ခြင်းကိုသာ မခွဲဖို့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိဘနဲ့ သားသမီး၊ ဆရာနဲ့တပည့်၊ ဆရာနဲ့ဒကာ၊ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမအချင်းချင်း၊ ဘယ်လိုချစ်ခင်ကြသူ အချင်းချင်းရဲ့ ချစ်ခြင်းကိုမဆို မခွဲဖို့ပြောတာပါ။
သူများချစ်ခြင်းခွဲရင် ကိုယ့်ချစ်ခြင်းကွဲမှာပါပဲ။ ဒါဟာသေချာတဲ့ ကမ္မနိယာမပါ။ သူများချစ်ခြင်း ခွဲခဲ့တဲ့သူတွေ၊ ခွဲနေတဲ့သူတွေဟာ အချစ်ကံခေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ်ကိုပြန်မချစ်၊ ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ကိုယ့်ကိုအကောင်းမထင်၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ အတူတူမနေရ၊ ချစ်တဲ့သူနဲ့ ဝေးနေရ၊ ကွဲကွာသွားရ၊ တစ်ချို့အိမ်ထောင်ကျပြီးတာတောင် အတူတူမနေရ၊ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမရှိ၊ ကိုယ့်ကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်မယ့်သူမရှိ၊ ကြိုက်မယ့်သူမရှိ၊ ကိုယ့်ကိုကြင်ကြင်နာနာ ဂရုစိုက်မယ့်သူမပေါ်၊ မိဘမေတ္တာ၊ မောင်နှမမေတ္တာဆိုတာ ခံစားခွင့်မကြုံ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမအချင်းချင်းမတည့်၊ ဆွေမျိုးတွေက တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်၊ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေက မိတ်ဆွေကောင်းမပီသ၊ ဒါတွေအားလုံးဟာ အချစ်ကံခေတာတွေချည်းပါပဲ။
ကိုယ်လိုချင်တာ အချုပ်အနှောင်မဲ့အချစ်များ ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘယ်သူမဆို အချုပ်အချယ်ကင်းတဲ့၊ အနှောင်အဖွဲ့ရှင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သန့်သန့်လွတ်လွတ်ကလေးကိုပဲ လိုချင်ကြပါတယ်။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုး သူတစ်ပါးကို အရင်ပေးနိုင်မှ အချစ်ကံကောင်းသူတစ်ယောက်အဖြစ် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခွင့်ရမှာမို့ သူတစ်ပါးအပေါ် အဓိပါယ်မဲ့ ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ချင်တဲ့ စိတ်ယုတ် စိတ်ပုတ်ကို နှင်ထုတ်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
ရှောင်စရာအဆိုးကံတွေ အထိုက်အလျောက် ပြောပြီးသွားတော့ ဆောင်စရာအကောင်းကံတွေ နည်းနည်း ပြောကြတာပေါ့။
အချစ်ကံကောင်းစေတဲ့ အဓိကအကျဆုံးကတော့ မေတ္တာတရား လက်ကိုင်ထားခြင်းပါပဲ။ သူတစ်ပါးအပေါ် စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားတွေ များများပေးနိုင်လေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကံအကျိုးပေး ကောင်းလေပါပဲ။ မေတ္တာကြီးလေ အချစ်ကံကောင်းလေပေါ့။
မေတ္တာက ပွားမေတ္တာနဲ့ ထားမေတ္တာ လို့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ ဆိုပြီး စိတ်ကနေ၊ ဒါမှမဟုတ် အသံထုတ်ပြီး မေတ္တာပို့နေတာကို ပွားမေတ္တာလို့ခေါ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်သားရဲ့ ကောင်းကျိုးကို ကာယကံမြောက် ကိုယ်ထိလက်ရောက်၊ ဝစီကံမြောက် နှုတ်ထိပါးစပ်ရောက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ မေတ္တာကို ထားမေတ္တာလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ပွားမေတ္တာရော ထားမေတ္တာရော မေတ္တာနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ ပြည့်စုံမှအချစ်ကံကောင်းမှာပါ။ တကယ်ဆို ပွားမေတ္တာထက် ထားမေတ္တာက ပိုလို့တောင် အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ထဲက သို့မဟုတ် နှုတ်က ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ တဖွဖွ မေတ္တာပို့နေပေမယ့်၊ တစ်ကယ့်လက်တွေ့မှာ သူတစ်ပါးစိတ်ဆင်းရဲစေမယ့် အပြောအဆို အပြုအမူတွေ၊ တစ်ဖက်သား ဆိုးကျိုးဖြစ်စေမယ့် အပြောအဆို အပြုအမူတွေ ပြောဆိုပြုမူနေမယ်ဆိုရင် နောင်ဘဝဆိုတာ အသာထား၊ အခုလောလောဆယ်မှာကို အဲဒီလူကို ဘယ်သူကမှ ချစ်ခင်နှစ်သက်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်၊ကျွန်မ အရာရာကို အကောင်းမြင်စိတ် မွေးပါတယ်။ လူတိုင်းအပေါ် မေတ္တာထားနိုင်ပါတယ်လို့ စကားတွေနဲ့ ကိုယ်ရည်သွေးပြီး ထုတ်ဖော်ကြွေးကြော်နေပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာ အဆိုးမြင်စိတ်ထားနဲ့ အဆိုးမြင်စကားတွေပဲပြော၊ အဆိုးမြင်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပဲ လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာ ပစ္စုပန်ဘဝရော၊ သံသရာဘဝတွေမှာပါ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမယ့်သူ မရှိနဲ့ အချစ်ကံခေပြီး ဝမ်းနည်းအားငယ်နေရမှာပါ။
မေတ္တာတရားကို လူချစ်ဆေး၊ နတ်ချစ်ဆေးလို့ ပြောတာဟာ မေတ္တာပို့သရုံသက်သက် တစ်ခြမ်းပဲ့ မေတ္တာသမားတွေ အတွက် ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖက်ကလည်း မေတ္တာပို့သ၊ တစ်ဖက်ကလည်း လိုသူ၊မလိုသူ မခွဲခြား၊ အလွှာမရွေး လူတန်းစားမရွေး၊ အရွယ်မရွေးအပေါ် ကိုယ်ထိလက်ရောက်၊ နှုတ်ထိပါးစပ်ရောက် အကျိုးဆောင်ပေးတတ်တဲ့ အပြည့်အဝ မေတ္တာသမားတွော၊ တင်းပြည့်မေတ္တာသမားတွေ အတွက်ပြောတာပါ။ ကိုယ့်အပေါ် လိုသူမပြောနဲ့၊ မလိုလားသူရဲ့ အပေါ်မှာတောင် မေတ္တာထားနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ်။ ဒါတွကလေ့ကျင့်ယူရတာတွေပါ။ လေ့ကျင့်အား အထုံကောင်းလာလေ စိတ် ထားတတ်လာလေပါပဲ။
ပွားမေတ္တာသက်သက်နဲ့တော့…… လူအပေါင်း၊နတ်အပေါင်းရဲ့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမူကိုရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပွားမေတ္တာရော ထားမေတ္တာရော ပြည့်စုံမှ လူအပေါင်း၊ နတ်အပေါင်းရဲ့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမူကို ရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်က လူထဲကလူဆိုတော့ နှစ်မျိုးစလုံး ပြည့်စုံအောင်မလုပ်နိုင်သေးရင် ပွားမေတ္တာကို အထုံရအောင်အရင် ပွားများပါ။ အထုံရလာပြီးဆိုရင် ထားမေတ္တာပါ ထားနိုင်လာ၊ ထားတတ်လာပါပြီ။ ကိုယ်ကအချစ်ကံ များများကောင်းချင်ရင် ပွားမေတ္တာရော၊ ထားမေတ္တာပါ ထားနိုင်ရပါမယ်။ ရတော့ရချင်တယ်။ လိုတော့လိုချင်တယ်။ ဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်တယ်။ မထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။
သီးခြားထိုင်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သွားရင်းနဲ့လာရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သတ္တဝါအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ မကြာခဏ မေတ္တာပို့သပါ။ ရေနဲ့ ခန္ဒာကိုယ်နဲ့ ထိတွေ့လာတိုင်းလည်း အေးမြတဲ့ရေကို သတ်သေထားအာရုံပြုပြီး သတ္တဝါတွေအားလုံး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ အေးချမ်းပါစေလို့ အထပ်ထပ်မေတ္တာပို့သပါ။ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့က မြင်တွေ့လာသမျှ၊ ကိုယ်အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ဆက်စပ် လာသမျှ လူတိုင်းလူတိုင်းကို ချက်ချင်းချက်ချင်း မေတ္တာပို့သပါ။ အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ မေတ္တာပို့သတဲ့ အလေ့အကျင့် အားကောင်းလာပြီဆိုရင် ပွားမေတ္တာနဲ့ ပြည့်စုံပါပြီ။
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ မေတ္တာဓါတ်တွေ ကိန်းဝပ်နေတဲ့ မေတ္တသုတ် တရားတော်ကို နေ့စဉ်ဝတ်ထားပြီး အချိန်ရရင် ရသလို အမြဲမပြတ် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း ဒေါသဓါတ်ကင်းပြီး မေတ္တာဓါတ်တွေ စိမ့်ဝင်ပြီး မြင်သူတိုင်းကချစ်ခင် မြတ်နိုး အားကိုးလေးစား တန်ဖိုးထားလာကြပါလိမ့်မယ်။
“နတ်များချစ်ဆေး၊ ဘေးရန်ဝေးသော၊ ယဉ်ကျေးမန္တန်၊ ဂါထာပျံကို ရွတ်အံသရဇ္ဈာယ်ကြကုန်လော့”…တဲ့။ မေတ္တာသုတ်ကိုရွတ်ရင် မမြင်ရတဲ့နတ်တွေတောင် ချစ်တယ်ဆိုမှတော့ မြင်ရတဲ့လူတွေက ပိုလို့တောင်ချစ်ပြီပေါ့။ အခေါက်ရေများဖို့ထက် အဓိပါယ်သိသိ စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီး ရွတ်ဖို့တော့ အရေးကြီးတာပေါ့။
မေတ္တာသုတ်ရွတ်ရုံ၊ မေတ္တာပွားရုံနဲ့ ကျေနပ်မနေဘဲ တစ်ဖက်သားကောင်းကျိုး၊ အများကောင်းကျိုးကို ကိုယ်နဲ့၊နှုတ်နဲ့ လက်တွေ့ ဆောင်ရွတ်ပေးပါ။ ကောင်းကွက်ကိုရှာ… မေတ္တာ ဆိုတဲ့အတိုင်း တစ်ဖက်သားရဲ့ ကောင်းကွက်ကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး လူတိုင်းအပေါ် အကောင်းမြင်စိတ်ထားနဲ့ အကောင်းမြင်စကားတွေပဲပြော၊ အကောင်းမြင်အလုပ်တွေပဲ လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ထားမေတ္တာနဲ့ ပြည့်စုံပါပြီ။
တစ်ဖက်သားကို နွေးနွေးထွေးထွေး ချစ်ခင်တတ်ရင် ကိုယ့်ကို နွေးနွေးထွေးထွေး ချစ်ခင်မယ့်သူပေါ်လာမှာပါ။ တစ်ဖက်သားကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကြင်နာတတ်ရင် ကိုယ့်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကြင်နာမယ့်သူ ရောက်လာမှာပါ။ တစ်ဖက်သားကို ထွေးထွေးပိုက်ပိုက် ယုယတတ်ရင် ကိုယ့်ကို ထွေးထွေးပိုက်ပိုက် ယုယမယ့်သူရှိလာမှာပါ။ တူသော အကျိုးပေးတတ်တဲ့ ကံတရားကို ဘယ်သူများဟန့်တားနိုင်တာမှတ်လို့……..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘက်ကပဲ အရင်ပေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်ဘက်ကပဲ အရင်ပေးကြည့်လိုက်ပါ။ ။။
(အရှင်ဆန္ဒာဓိက၏ “အကောင်းကံချစ်မှအချစ်ကံကောင်းမယ်” စာအုပ်မှဖြစ်ပါသည်) နှလုံးသားအာဟာရ
Posted by Ayeit Chit at 21:13 1 comment:
Posted by Ayeit Chit at 00:03 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 23:20 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 22:57 No comments:
ဖြစ်နိုင်ရင် မချစ်ချင်တော့ဘူး .......
ဒီနှလုံးသားက ပေးလိုက်ရတဲ့ အကြင်နာတွေ
စွဲလမ်းစွာ နှောင်ရစ်ခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတွေ
ပေးခဲ့ရပေမယ့် ပြန်မရခဲ့တဲ့ ဒီဘ၀ကြီးမှာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို " ဘာ အပြစ်ရှိသလဲ "
ဆန်းစစ်ရင်း သိမ်ငယ်လာမိတယ် .......
ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း " အချစ် " ဆိုတဲ့အရာကြီးကို
အယုံအကြည် မရှိတော့ လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့်
ချစ်သူ ငါနင့်ကို အပြစ်မမြင်ရက်ပါဘူး ...
နင်လဲ နင်အဆင်ပြေမယ့် လမ်းကို
စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ခဲ့တာပဲ .....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါလေ နင့်ကို
အရမ်းလည်း ခွင့်လွှတ်နေခဲ့ရပါတယ် ဟာ
" Naing Naing "
Posted by Ayeit Chit at 22:49 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 19:01 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 18:55 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 18:42 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 18:29 No comments:
ဆရာကြီးဦးဌေးလှိုင်က သူ့ ရဲ့ မေတ္တာဝါဒစာအုပ်မှာ ကိုယ်တွေ့ 
ဝတ္ထုလေး ထည့်ရေးပြထားပါတယ်။ အဲဒီဝတ္ထုလေးအကျဉ်းချုပ် ပြောပြရအောင်ပါ။
တစ်ခါတုန်းက မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆီကို ဒကာမကြီးတစ်ယောက် တရားလာအားထုတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူကတရားမှတ်လို့ မရဘဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆရာတော်ကြီးက မေတ္တာပွားနည်းကို အရင်သင်ပေးပါတယ်။
က “တပည့်တောာ် ကျန်တဲ့သူတွေကို မေတ္တာပို့ လို့ ရပေမယ့် စီးပွားပြိုင်ဘက် ရန်သူအိမ်နီးချင် ဒကာမကိုတော့ ပို့ လို့ မရ ဖြစ်နေတယ်ဘုရား” လို့လျှောက်ပြပါတယ်။ ဒီတော့ ဆရာတော်ကြီးက “ရန်သူကို နောက်ဆုံးမှထားပို့ ပါ။ ပို့ လည်းပို့ ကြည့်ပါဦး။ သံသရာမှာ ဆွေမျိုးမတော်ခဲ့သူ မရှိဘူး။ သူ့ ကျေးဇူးလေးတွေကို ရှုပြီး ပို့ ပါ။” လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်သုံးလေးရက်ကြာလာတော့ ဒကာမကြီးက ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆီ ပြန်ရောက်လာပြီး “ဆရာတော်ဘုရား တပည့်တော် မေတ္တာပို့ လို့ရသွားပါပြီဘုရား။ မေတ္တာပို့ နေရင်း တပည့်တော်ရဲ့အာရုံထဲမှာ ပို့ ရင်းပို့ ရင်းနဲ့သူ့ မျက်နှာက ပြုံးလာပါတယ်ဘုရား။ ပြုံးပြီး တပည့်တော်ကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီလောက်နဲ့ တပည့်တော် မအံ့သြသေးပါဘူး။ အပြင်မှာလည်း တပည့်တော်ကို တရားအာရုံထဲမှာမြင်ရတဲ့ အင်္ကျီလုံချည်နဲ့လာတောင်းပန်ပါတယ်ဘုရား” လို့သူကလျှောက်ပြပါတယ်။
ဆရာကြီးဦးဌေးလှိုင်က သူ့ ကိုယ်တွေ့ ကလေးကို ထုတ်ပြထားတာပါ။
ပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့ သူ့ အတိုင်းအတာနဲ့ သူတော့ ရန်သူ မလိုလားသူ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်သူတွေကတော့ ရှိနေကြမှာပါပဲ။ ဒီတော့ ဒေါသကလည်း ၀င်လာတော့မှာပါ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပဲ ၀င်လာ ၀င်လာ၊ မေတ္တာပွားချင်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ဝင်လာတဲ့ဒေါသကို ပယ်ပစ်ရပါ့မယ်။ ဒေါသဟာ မေတ္တာရဲ့ ရန်သူပါ။ ဒီတော့ ဘယ်လို ပယ်မလဲ...?
၀ိသုဒ္ဓိမဂ်က ဒေါသ၀င်လာရင် ဖြေဖျောက်နည်း (၁၁)နည်းကို ဆက်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီ (၁၁)နည်းကိုလည်း ဒီမှာ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းပြောပြရအောင်ပါ။
၁။ မေတ္တာပွား၍ ဖျောက်ခြင်း၊
၂။ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမသြ၀ါဒကို ဆင်ခြင်၍ ဖျောက်ခြင်း၊
၃။ ရန်သူ၏ ကောင်းကွက်ကို ရှာ၍ ဖျောက်ခြင်း၊
၄။ သနား၍ ဖျောက်ခြင်း၊
၅။ မိမိကိုယ်ကို ဆုံးမ၍ ဖျောက်ခြင်း၊
၆။ ကမ္မဿကတာဉာဏ်ဖြင့် ဖျောက်ခြင်း၊
၇။ သည်းခံပုံ ဇာတ်တော်လာ နည်းများဖြင့် ဖျောက်ခြင်း၊
၈။ သံသရာတစ်လျှောက်၌ ဆွေမျိုးမတော်ခဲ့သူ မရှိဟု ဆင်ခြင်၍ ဖျောက်ခြင်း၊
၉။ မေတ္တာအကျိုးကို ဆင်ခြင်၍ ဖျောက်ခြင်း၊
၁၀။ ဓာတ်ခွဲ၍ ဖျောက်ခြင်း၊
၁၁။ ဥစ္စာပေးယူ၍ ဖျောက်ခြင်း၊
အားလုံးပေါင်း (၁၁) နည်းပါ။
နံပါတ် (၁) က မေတ္တာပွားပြီး ဖျောက်ရပါမယ်။ ရှေ့ မှာ ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း မိမိ, ချစ်သူ, အလယ်အလတ်ပုဂ္ဂိုလ်, ရန်သူကို အစဉ်အတိုင်းပွားရပါ့မယ်။ အဲဒီလိုပွားပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။
မေတ္တာပွားလို့ မှ မပျောက်ရင် နံပါတ် (၂) က မြတ်စွာဘုရားရဲ့သြ၀ါဒကို ဆင်ခြင်ပြီး ဖျောက်ရပါ့မယ်။ ဆင်ခြင်ပုံကတော့...
“အို...ယောဂီ အမျက်ထွက်တာ မကောင်းမှန်း သိပါလျက် အမျက်ထွက်လာသူကို ကိုယ်က ပြန်ထွက်ရင် ပထမအမျက်ထွက်တဲ့သူထက် ပိုမိုက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတယ် မဟုတ်လား။
ပြီးတော့ သူတစ်ပါး အမျက်ထွက်တာကို သိပြီး ကိုယ်ကမထွက်ဘဲ နေလိုက်တာဟာ မိမိသူတစ်ပါး နှစ်ဦးသားရဲ့ အကျိုးကို ကျင့်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ လည်း မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတယ် မဟုတ်လား။
အစွန်းနှစ်ဘက်ကလည်း မီးလောင်၊ အလယ်မှာလည်း မစင်ပေနေ၊ သူသေကောင်ဖုတ်တဲ့နေရာမှာလည်း အသုံးပြုထားတဲ့ ထင်းကုလားတုံးဟာ မြို့ ရွာမှာ ဘာမှ အသုံးမ၀င်သလို ဒေါသထွက်တဲ့သူဟာလည်း အဲဒီထင်းတုံးအတိုင်းပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရား ဟောထားပြန်တယ် မဟုတ်လား” စသည်ဖြင့် အဲဒီလိုဆင်ခြင်ပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။ ဒါမှမဟုတ် တခြားကိုယ်ကြားဖူးတဲ့ သြ၀ါဒနဲ့ လည်း ဆင်ခြင်ပြီး ဖျောက်လို့ ရပါတယ်။
အဲဒီလိုဆင်ခြင်လို့ မှ မပျောက်ရင် နံပါတ်(၃) က ရန်သူရဲ့ ကောင်းကွက်ကလေးကို ရှာပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။ “သြော် သူက အပြောသာကြမ်းတာ၊ အတွင်းစိတ်ကတော့ ကောင်းသားပဲ၊ ဘယ်တုန်းကတော့ ငါ့ကို ဘယ်လိုကူညီခဲ့ဖူးတာပဲ” စသည်ဖြင့် ကောင်းကွက် ဒါမှမဟုတ် ပြုခဲ့ဖူးတဲ့ ကျေးဇူးလေးတွေကို ဆင်ခြင်ပြီး ဖျောက်ရပါတယ်။
နံပါတ်(၄)က သနားပြီးဖျောက်ပါတဲ့။ “သြော် သူငါ့အပေါ် မကောင်းတဲ့စိတ်တွေ ထားနေပါလား၊ အဲဒီ မကောင်းတဲ့စိတ်က သူ့ ကိုမကောင်းကျိုးပေးတော့မှာပဲ၊ အို...သနားစရာပဲ” အဲဒီလိုသနားပြီး ဖျောက်ပါ။ ကရုဏာထားပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။
အဲဒီလိုဆင်ခြင်လို့ မှ မပျောက်ရင် နံပါတ်(၅) က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမပြီးဖျောက်ပါတဲ့။
၀ိသုဒ္ဓိမဂ်ကတော့ ဆုံးမပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂါထာ(၁၀)ဂါထာပြထားပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အဲဒီ (၁၀)ဂါထာလုံးကို မပြောတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမတတ်သလို ဆုံးမပြီး ဖျောက်လို့ ရပါတယ်။ “အို...ယောဂီ၊ ရန်သူကို အမျက်ပြန်ထွက်ရင် သူ့ အကြိုက်ဖြစ်မှာပေါ့။ ကိုယ့်အမျက်ထွက်လိုက်လို့သူ့ ရဲ့ ဆင်းရဲမှုကို ပြုနိုင်တာလည်းရှိမယ်၊ မပြုနိုင်တာလည်း ရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် လောလောဆယ် ကိုယ်ကတော့ ဒေါသရဲ့ နှိပ်စက်မှုကို ခံနေရပြီ မဟုတ်လား” စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။
အဲဒီလိုဆင်ခြင်လို့ မှ မပျောက်ရင် နံပါတ်(၆) က ကမ္မဿကတာဉာဏ်နဲ့ ဖျောက်ပါတဲ့။ ကမ္မဿကတာဉာဏ်ဆိုတာ ကံသာလျှင် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်လို့သိတဲ့ဉာဏ်ပါ။
“သူပြုနေတဲ့ မကောင်းတဲ့ကံဟာ သူ့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်သွားပြီ။ အဲဒီကံကပဲ မကောင်းကံအားလျှော်စွာ အကျိုးပေးတော့မှာ၊ ငါက ဝေဖန်စရာမလိုဘူး။ ကံကပဲ သူ့ ကို ဝေဖန်ပေးလိမ့်မယ်။” အဲဒီလိုကံကို ဆင်ခြင်ပြီး ဖျောက်ရပါ့မယ်။
အဲဒီလိုဆင်ခြင်လို့ မှ မပျောက်ရင် နံပါတ်(၇)က သည်းခံမှုဇာတ်တော်တွေကို အာရုံပြုပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။ မဟာသီလ၀ဇာတ်၊ ခန္တီဝါဒီဇာတ်၊ ဆဒ္ဒန္တဇာတ်၊ မဟာကပိဇာတ် စသည်ဖြင့် ကိုယ်ကြားဖူးတဲ့ ဇာတ်တစ်ခုခုကို အာရုံပြုပြီး “ဘုရားအလောင်းဟာ သည်းခံခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုအာရုံပြုပြီး သည်းခံခဲ့တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးတော့ အောင်မြင်တာပဲ။ ဘယ်ကိစ္စမဆို သည်းခံလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားတာပါ။” အဲဒီလိုသည်းခံစိတ်မွေးပြီး ဖျောက်ရပါမယ်။
သည်းခံစိတ်မွေးလို့ မှ မပျောက်ရင် နံပါတ်(၈)က ဆွေမျိုးစပ်ပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။
“သြော်...သံသရာမှာ ဆွေမျိုးမတော်ခဲ့တဲ့သူဆိုတာ မရှိဘူး။ ဘ၀တစ်ခုမှာ ငါ့ရဲ့ အမေ တော်ခဲ့ရင် တော်ခဲ့မှာပဲ။ အမေတော်ခဲ့တုန်းက ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ အပူအစပ်တွေလည်း ရှောင်ခဲ့ရမှာပဲ။ အနေအထိုင်အသွားအလာလည်း ဆင်ခြင်ခဲ့ရမှာပဲ။ မွေးလာတဲ့အခါမှာလည်း မေတ္တာအပြည့်နဲ့နို့ ချိုတိုက်ကျွေးပြီး ပြုစုခဲ့မှာပဲ။ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေကိုလည်း မရွံမရှာ သုတ်သင်ပေးခဲ့မှာပဲ။ ငါ့ရဲ့ အဖေလည်း တော်ခဲ့ချင်တော်ခဲ့မှာပဲ။ ငါ့ရဲ့ အဖေတော်ခဲ့တုန်းက အရပ်တစ်ပါးကိုသွားပြီး သက်စွန့် ဆံဖျား စီးပွားရှာပြီး ငါ့ကို ကျွေးမွေးခဲ့မှာပဲ။ ငါ့အတွက် အသက်ကိုလည်း စွန့် ချင်စွန့် ခဲ့မှာပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ငါ့ရဲ့ သားသမီး ညီအစ်ကိုမောင်နှမလည်း တော်ခဲ့မှာပဲ။ အဲဒီလိုဆွေမျိုးစပ်ပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။ အနမတဂ္ဂိယသံယုတ်လာ သုတ်တို့ မှာ ပြထားတာက သံသရာမှာ အမိအဘ ညီအစ်ကို မောင်နှမ မတော်ခဲ့ဖူးတာ ရှိကို မရှိပါဘူးတဲ့။ တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုးတော့ ဆွေမျိုးတော်စပ်ခဲ့ကြတာပါပဲတဲ့။
အဲဒီလိုဆင်ခြင်လို့ မှ မပျောက်ရင် နံပါတ်(၉)က မေတ္တာအကျိုးတွေကို ဆင်ခြင်ပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။
မေတ္တာပွားတဲ့သူဟာ ချမ်းချမ်းသာသာ အိပ်ရတယ်၊ ချမ်းချမ်းသာသာ နိုးရတယ်။ ကောင်းတဲ့အိပ်မက်ကိုပဲ မက်ရတယ်။ နတ်လည်းချစ်တယ်။ လူလည်းချစ်တယ်။ နတ်တွေလည်း စောင့်ရှောက်တယ်။ မီး အဆိပ် ဓားတွေကိုလည်း ရှောင်ရှားပေးတယ်။ လျင်လျင်မြန်မြန် သမာဓိရတယ်။ မျက်နှာလည်း ကြည်လင်တယ်။ သေတဲ့အခါ တွေတွေဝေေ၀မသေရဘူး။ ဗြဟ္မာပြည်လည်း ရောက်နိုင်တယ်။ အဲဒီလို မေတ္တာအကျိုးကိုဆင်ခြင်ပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။ ဒီမေတ္တာအကျိုး (၁၁)မျိုးကို မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့ကပ်မှတ်ထားလိုက်ပါ။
(အိပ်နိုးချမ်းသာ၊ ကောင်းစွာအိပ်မက်၊ ချစ်လျက်လူနတ်၊ စောင့်လျက်နတ်များ၊ မီးဆိပ်ဓားတို့ ၊ ရှောင်ရှားကိုယ်မှာ၊ လျင်စွာစိတ်တည်၊ ရွှင်ကြည်မျက်နှာ၊ သေတာမတွေ၊ လားလေဗြဟ္မာ၊ ဆယ့်တစ်ဖြာသည်၊ မေတ္တာပွားမှုအကျိုးတည်း။)
မေတ္တာအကျိုးကိုမှ ဆင်ခြင်လို့ မှ မပျောက်ရင် နံပါတ် (၁၀)က ဓာတ်ခွဲပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။
ဓာတ်ခွဲပုံကတော့ “နေပါဦး...အို ယောဂီ၊ သင်အမျက်ထွက်နေတာက ဘာကိုအမျက်ထွက်နေတာလဲ။ သူ့ ရဲ့ ဆံပင်ကိုလား၊ အသည်းကိုလား၊ အသားကိုလား၊ အကြောကိုလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပထ၀ီဓာတ်ကိုလား၊ အာပေါဓာတ်ကိုလား၊ ရူပက္ခန္ဓာကိုလား၊ ဝေဒနာက္ခန္ဓာကိုလား” စသည်ဖြင့် အဲဒီလိုဓာတ်ခွဲပြီး ဖျောက်ရပါတယ်။။
ဓာတ်ခွဲလို့ မှ မပျောက်ရင် နံပါတ်(၁၁)က ဥစ္စာပေးယူပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။
သူနှစ်သက်မယ်ထင်တဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေပေးပြီး ဖျောက်ပါတဲ့။
သီဟိုဠ်ခေတ်က သံဃိကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ မထေရ်ကြီးတစ်ပါးက မထေရ်ငယ်တစ်ပါးကို အမျက်ထွက်ပြီး ကျောင်းတိုက်ကထွက်သွားရအောင် လုပ်နေပါတယ်တဲ့။ ဒီတော့ မထေရ်ငယ်က မထေရ်ကြီးဆီသွားပြီး “ဆရာတော်ဘုရား၊ ဒါကရှစ်ကျပ်တန် အကောင်းစားသပိတ်ပါဘုရား။ တပည့်တော်ရဲ့ မယ်တော်ကြီးက လှူထားတဲ့အတွက် အပ်အပ်စပ်စပ် ရထားတာပါဘုရား။ သုံးဆောင်ပါဘုရား” အဲဒီလို သွားပေးလိုက်တော့ မထေရ်ကြီးနဲ့မထေရ်ငယ်ဟာ အဆင်ပြေသွားပါတယ်တဲ့။ ဒါလည်း ၀ိသုဒ္ဓိမဂ်က ပြထားတဲ့ ၀တ္ထုလေးပါ။ ပေးကမ်းခြင်းသည် အောင်မြင်ရာ၏ဆိုတဲ့ လူတွေပြောနေတဲ့စကားဟာ ဘုရားဟော တစ်ခုပါပဲ။
ကိုယ့်သန္တန်မှာဖြစ်နေတဲ့ ဒေါသရန်ငြိုးကို အထက်က (၁၁)နည်းထဲက ကိုယ်နှစ်သက်ရာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ဖျောက်ပါတဲ့။ (၁၁)နည်းလုံးနဲ့ဖျောက်ဖို့ မလိုပါဘူး။
မေတ္တာပွားမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒေါသရန်ငြိုးကို ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဖျောက်ရပါ့မယ်။ ဒါမှလည်း မေတ္တာပွားလို့ ရမှာပါ။ ကဲ စာဖတ်သူတွေ ပြောကြည့်ပါဦး၊ ရန်ငြိုးဖျောက်နည်း (၁၁)နည်းထဲက ဘယ်နည်းကို ကြိုက်တယ်ဆိုတာ။
ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်နှစ်သက်ရာ တစ်နည်းနည်းနဲ့ တော့ ဖျောက်ကြည့်ဖို့ ပါပဲလေ။
Posted by Ayeit Chit at 15:28 No comments:
နင့်ကိုိ လွမ်းလို့ကျခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တွေအတွက်
ယုံကြည်မှု့တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ငါတို့အချစ်တွေကို
ကြိုတင် သိခွင့်မရတဲ့ အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေအတွက်..
ချစ်ခွင့်ရတဲ့ဘ၀မှာ နောင်တ မရှိတဲ့ အချစ်တွေနဲပဲ
ငါ နင့်ကို ရင်နင့်အောင် ဆက်၍ချစ်နေမယ်...။
Posted by Ayeit Chit at 15:20 No comments:
“ ပေးဆပ်တယ်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ အင်မတန်လှပ
ပါတယ်။ မိမိက အထက်ကနေပြီး အောက်ကိုချပေးတဲ့
သဘောမဟုတ်ပဲ၊ ပူဇော်သကဲ့သို့ ကျေကျေနပ်နပ်
မော်ကြည့်တဲ့ အပေးမျိုး။ “ရယူခြင်းရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်
မျိုးပါ” ။ ပေးဆပ်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ ထမ်းတဲ့ဝန်ဆိုတာ
တန်ဖိုးတောင်ဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ ”
( “ ဒီစကား ” မှကောက်နုတ်ချက် ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ ၁ ၊ အမှတ် ၄၉ )
Posted by Ayeit Chit at 22:53 No comments:
ဒို့လူမျိုးတွေက ကျွန်ဘဝကနေ မလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူး၊
အဲ့တော့ သခင်စိတ်ကို မထားတတ်ကြသေးဘူး။
သူများကို အဖက်မလုပ်တာမျိုး ဘဝင်မြှင့်နေတာမျိုး၊
ကိုယ်ကောင်းစားသလို သူများကို မကောင်းစားစေလိုတာမျိုး၊
သူတစ်ပါးကောင်းစားလာရင် မနာလို ဝင်တိုတာမျိုးတွေပေါ့။
ခွင့်လွတ် နားလည်း မျှဝေတတ်သူ တွေပေါ့။
ဒီလို သခင်စိတ်ထားတတ်အောင် ကြိုးစားကြပါ။
( Bhikkhu Bodhi )
အလှူပွဲတစ်ပွဲ၌ ဆရာတော် ဟောကြားထားသော တရားတော်မှ မှတ်မိသလောက် ပြန်လည်းရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ayeit Chit at 05:44 No comments:
သက်ရောက်မှုတိုင်းတွင် တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ရှိတယ်။ စေတနာပါတဲ့ လုပ်ရပ်တိုင်းမှာ တန်ပြန်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အတုံ့အလှည့်ဆိုတာ ရှိနေပါတယ်။ လုပ်တဲ့သူက အကောင်းပြုလုပ်ရင် တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရဲ့ အတုံ့အလှည့်ဟာ ကောင်းမှာဖြစ်ပြီး လုပ်တဲ့သူက မကောင်းပြုလုပ်ရင် တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရဲ့ အတုံ့အလှည့်ဟာလည်း မကောင်းဖြစ်နေမှာပဲ။ ကိုယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ နှုတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ပြောဆိုကြံစည်မှုများဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပြီး အဲဒီရဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုဟာလည်း ကိုယ့်ထံပဲပြန်လာမယ်။ အပြုအမူကောင်းရင် အတုံ့အလှည့်ကောင်းမှာဖြစ်ပြီး အပြုအမူဆိုးရင် အတုံ့အလှည့် ဆိုးမှာပဲ။
Posted by Ayeit Chit at 05:38 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 05:25 No comments:
လူအတော်များများက အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဟန်ပြလုပ်တာတွေ၊ဟန်ဆောင်လုပ်တာတွေကို လုပ်ပြလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ စေတနာ မပါဘဲ သူများအထင်ကြီးအောင်၊ သူများလေးစားအောင် လူရှေ့သူရှေ့ ဟန်ဆောင်လေ့ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမှန်ပြယုဂ်မဟုတ်ဘဲ ဟန်ဆောင်သရုပ်သာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်တန်တော့လည်း သူ့အလုိုလုို လဲသွားကြတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ စေတနာ အဟုတ်နဲ့ အမှန်လုပ်ဖုို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စေတနာမှန်မယ်၊ ရုိုးသားမယ်ဆုိုရင် အကျိုးတရားဆုိုတာ အချိန်တန်ရင် ကုိုယ်ကမမျှော်လည်း သူ့အလုပ်သူလုပ်၊ သူ့အကျိုးသူပေးသွားမှာပါ။
Posted by Ayeit Chit at 05:19 No comments:
ခဏ ပျော်ရပြီးတော့ ရေရှည်မှာ စိတ်ဆင်းရဲစေမယ့် ကိစ္စမျိုးကို မလုပ်သင့်ဘူး။ အသိညဏ်ကိုဘေးဖယ်ထားပြီး မလုပ်သင့်မှန်း သိရက်နဲ့ ပျော်ဖို့ကို ဦးစားပေးပြီး လုပ်လိုက်ရင် ပိုစိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။
လောကသဘာဝ စိတ်ရဲ့သဘာဝမှာ Reality Principle လို့ခေါ်တဲ့ နိယာမတစ်ခု ရှိပါတယ်။ မလုပ်သင့်တာကိုလုပ်ရင် စိတ်ချမ်းသာမှု ရမှာမဟုတ်ဘူး။ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ဆိုတာကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီး လုပ်သင့်တာကို လုပ်ပါ။ လုပ်သင့်တာကို လုပ်ပြီး ပျော်ရတာ ကောင်းပါတယ်။
အခုလည်းပျော်တယ်။ နောင်လည်းပျော်တယ်။ ကိုယ်လည်းပျော်တယ်။ သူများလည်းပျော်တယ်ဆိုရင် သိပ်ကောင်းပါတယ်။ သူများကို စိတ်ဆင်းရဲစေပြီး ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာ reality principle ကိုဆန့်ကျင်နေတယ်။ အဲဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ပျော်ပျော်နေပါ။ ပျော်တာကိုလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် reality principle ကိုမမေ့ပါနဲ့။ “လုပ်သင့်တာကို မလုပ်ရင်လည်း စိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။ မလုပ်သင့်တာကို လုပ်ရင်လဲ စိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်” ကောင်းတာကိုလုပ်ပြီးပျော်တာ၊ လုပ်သင့်တာကိုလုပ်ပြီး ပျော်တာက စိတ်မှာ လွတ်လပ်မှု ပိုရှိပါတယ်။ လုပ်ပြီးမှ နောင်တရနေတတ်တာ မလွတ်လပ်ဘူး။ နောင်တရစရာမရှိတဲ့ ပျော်နည်းက အကောင်းဆုံးပဲ။ မသိလို့ မှားသွားတာ ရှိပါတယ်။ အမှားတွေကို ထပ်မမှားဖို့ အရေးကြီးတယ်။
အခု ခဏပင်ပန်းပေမယ့် ရေရှည်မှာ စိတ်ချမ်းသာမယ့်ကိစ္စမျိုးကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ ပရွက်ဆိတ်နဲ့ နှံကောင်ပုံပြင်ကို မမေ့ပါနဲ့။
(စိတ်ချမ်းသာဖို့ လိုရင်းပါစာအုပ်မှ) နှလုံးသားအာဟာရ
Posted by Ayeit Chit at 05:09 No comments:
လောကမှာ အရှက်လွဲနေတဲ့သူတွေ တော်တော်များပါတယ်။ ရှက်စရာ မဟုတ်တဲ့အရာတွေမှာ ရှက်နေပြီး ရှက်ရမယ့်အရာတွေကျတော့ မရှက်ဘဲ ဖြစ်နေတတ်တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ လောကီနယ်ပယ်မှာ ရှိနေကြတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြည့်စုံမှု၊မပြည့်စုံမှု၊ ပညာတတ်မှု၊မတတ်မှု၊ ဂုဏ်ရှိမှု၊မရှိမှုတွေဟာ တကယ်တော့ ရှက်စရာတွေ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပျက်စီးတာ၊ လောက၀တ်တွေ ဖောက်ပြန်တာ၊ ဓမ္မ၀တ်တွေ ချွတ်ယွင်းတာ စတာတွေကသာ တကယ့်ရှက်စရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုပြီး ရှက်စရာကောင်းတာက ကိုယ်အမှားလုပ်မိတာကို မသိဘဲ အမှားကို အမှန်လို့ ထင်ပြီး ဘယ်သူဘာပြောပြော ကိုယ်ကအမှန်ဆိုတဲ့ တစ်ယူသန် အစွဲနဲ့ ဇွတ်အတင်း မဟုတ်တာကို ကိုင်စွဲထားတဲ့ အချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး ရှက်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်တာ ကိုယ်အသိဆုံး ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူမှ မသိဘူးဆိုပေမယ့် သေချာတွေးကြည့်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သိနေတာပဲဖြစ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရှက်နေရမယ့် အဖြစ်ပါ။
အရက်မသောက်တဲ့ သူတွေက အရက်သောက်တာ တစ်ခုလောက်ကိုပဲ ရှက်စရာလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင် အရက်သောက်တာမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မကောင်းမှုမှန်သမျှ ရှက်ရမယ့် အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့များအသက်သတ်တာ၊ သူများပစ္စည်းခိုးတာ၊ သူများသားမယား ပြစ်မှားတာ၊ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာ၊ လိမ်ညာပြောဆိုတာ စတာတွေဟာလည်း ရှက်ရမယ့် အရာတွေပါပဲ။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးအဆင်မပြေဖြစ်အောင် ဂုံးတိုက်တာ၊ ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းပြီး ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားကိုပြောဆိုတာ၊ သူ့အတွက်လည်း အကျိုးမရှိ ကိုယ့်အတွက်လည်း အကျိုးမရှိတဲ့ စကားမျိုးကို ပြောဆိုတာ စတာတွေကလည်း ရှက်စရာတွေပါပဲ။ ပြီးတော့ သူတပါးအပေါ် အဘိဇ္ဈာပွားတာ၊ သူတပါးစည်းစိမ်ဥစ္စာ ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း ကြံစည်တာ၊ အယူဝါဒ လွဲမှားတာတွေဟာလည်း ရှက်စရာတွေထဲမှာ ပါနေပါတယ်။ ဒီလို မကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေနဲ့ ပျော်မွေ့နေတာတွေကမှ တကယ့်ရှက်စရာတွေ ဖြစ်နေတာပါ။
ဒါကြောင့် ကိုယ်တကယ် ရှက်ရမယ့် အရာတွေမှာ မရှက်ဘဲ မရှက်ရမယ့် အရာတွေမှာ ရှက်နေတတ်တဲ့ အရှက်လွဲနေသူတွေ အနေနဲ့ လွဲနေတာတွေကို အချိန်မီ အသိဝင်ကာ ရှက်သင့်တာတွေကို ရှက်ပြီးရှောင်ရှားနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ လိုတယ်လို့ ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ayeit Chit at 04:50 No comments:
Posted by Ayeit Chit at 03:03 No comments:
ခြေဖနောက်ကွဲအက်ခြင်းသည် အရေပြား အလွန်အမင်း ခြောက်သွေ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။အက်ကွဲကြောင်းတွေဟာ ပိုပြီး အရာထင်မှု နက်ရှိုင်းလာခဲ့ရင် အခြေအနေ ပိုဆိုးလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လူအတော်များများဟာ အခြေအနေဆိုးတဲ့ အခါရောက်မှာသာလျှင် ကုသမှုခံယူဖို့ ပြုလုပ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ တော်ရုံအက်ကွဲမှုဖနောင့်ကိုတော့ ဘောက်ဆတ်ဆတ်နင်းပြီး လျှောက်လှမ်းလို့
နေလေ့ရှိပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး လျှောက်လို့ ရပါတယ်ဆိုပြီး လမ်းဆက်လျှောက်မယ် ပြုလုပ်ကြပါတယ် ။
ခြေဖနောင့်ကွဲနေစဉ်မှာ တကယ်လို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ရေကိုနေ့စဉ်မချိုးပါနဲ့။ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်ထက်လည်း ပိုမချိုးမိစေပါနဲ့။ ရေချိုးရင်လည်း စိမ်ပြီးမချိုးပါနဲ့။ ခပ်သုတ်သုတ်လေး ချိုးပေးပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ပြင်ပရှိ ရေတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ရှိ အစိုဓာတ်များကို ဆေးကြောသွားပြီး အစိုဓာတ်ကို ပြန့်လွှင့်စေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ခြေဖနောင့်ကွဲတာဟာ အရမ်းပြင်းထန်နေတယ်ဆိုရင် ခြေတုံးလုံးနဲ့ လမ်းလျှောက်ခြင်းကို လုံးဝရှောင်ရှားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇင့်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်များဖြစ်တဲ့ ပင်လယ်ခရု၊ ကြက်သား၊ ပဲ၊ ထောပတ်၊ ဒိန်ချဉ်နဲ့ ငါးတို့ကို စားသောက်ပေးရပါမယ်။တခြား အရေးကြီးတဲ့ ဗီတာမင်များနဲ့ သတ္တုဓာတ်များကတော့ ဗီတာမင်အီး၊ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်၊ သံဓာတ်များကို ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်တင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ayeit Chit at 03:11 No comments: